ကိုပီတာရဲ့အတွေးပုံရိပ်များ: July 2011
မိတ်ဆွေကြီး ကိုမိုးအခန်းမှာ အင်တာနက်ခေတ္တသုံးလို့ ရတုံး ယခင်စုထားတဲ့ ပုံလေးတွေတင်လိုက်ပါတယ်...
အဲဒါတွေဖတ်ပြီးမှ ကိုယ်အသက်ကြီးမှန်းသိလာတော့ တယ်...
သူတို့ ဆီမှာလေထိုးကျွတ်ဖာဆိုင်ဖွင့် ရင်တော့ ထမင်းငတ်မှာ အသေအချာပဲ...
ပထမပုံကိုကြည့် ယင်တော့ သိပ်အန္တရယ်မရှိဘူးထင်ရပေမယ့် 
ဒုတိယပုံကိုကြည့် လိုက်တော့ မှ အောင်မယ်လေး ...ကံကောင်းလို့ဆိုရမယ်...
ကြီးကျယ်မြင့် မြတ်သူ၊ လူတော်တွေက အကြံကောင်းဥာဏ်ကောင်း၊ စိတ်ကူးကောင်းတွေ
ကျင်က အကြောင်းအရာအတွေကိုပြောဆိုလေ့ ရှိကြကာ....လူစွမ်းလူစမရှိသူ
တွေကတော့ သူများတွေအကြောင်းပဲ ( အကျိူးမရှိတဲ့ ကိစ္စတွေကိုသာ )
ပြောနေလေ့ ရှိပါတယ်တဲ့ ...
အခုမှပဲ မြင်ကွင်းတွေကို အားရပါးရကြည့် ရ၊ မြင်ရတော့ တယ်...
မကြာသေးခင်ကမှ လွန်မြောက်ပြီးဆုံးသွားတဲ့ဒူဘိုင်းက ဘလော့ ဂ်ဂါ ညီမ နှစ်ယောက်ရဲ့ မွေးနေ့ 
မှာ ဒီလို အထူးစပါယ်ရှယ် မွေးနေ့ ကိတ်မျိူးနဲ့ ကျင်းပပေးချင်လိုက်တာ...အင်တာနက်မရလို့ 
မွေးနေ့ လွန်မှကျင်းပပေးနိုင်တာ ကိုပီတာကြီးကိုစိတ်မဆိုးစိတ်မဆိုးကြနဲ့ နော်...
Happy Birthday !!!! ပါ ချစ်ညီမတို့ ရေ...
သူတွေးတာလည်း ဟုတ်တော့ ဟုတ်သား...
မီးမီး ကိုမော်ဒယ်အဖြစ် မျက်နှာဖုံးမှာထည့်ပေးမှာလားဟင်...!!!
အလုပ်နဲ့ လက်တွေ့ ပြတာက အပြောထက်ပိုကောင်းပါတယ်တဲ့ ဗျာ...
စိတ်ကောင်းရှိဖို့ ပထမပါတဲ့ ...မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းမိန့် ဆိုခဲ့ ပါတယ်ဗျာ...
Posted by Unknown | at 5:25 AM | 1 comments
စခန်းချကာ လမ်းပြလို့ ဖမ်းရပါတယ်…
အနေအထားတွေ ဘယ်လိုပင် ယိုယွင်းနေပါစေ…
အဓိက ကတော့ အဓိကပါပဲ…
စင်္ကာပူမှာက အိမ်ခန်း၊ဆိုင်ခန်းခ ဈေးကြီးတယ်လေ…
ယခုနှစ်အစောပိုင်းကာလကတည်းက စင်္ကာပူနိုင်ငံသို့ အလည်အပါတ်ရောက်ရှိခဲ့ သည့် အသက် ၄၄ နှစ်အ
ရွယ်ရှိ ရမ်မရစ်အပီစစ် ဟာ ဟိုဂန်းရိပ်သာ အမှတ် ၃ အနီးရှိ တောအုပ်အတွင်းသို့ မကြာခဏသွားရောက်
၎င်းနှင့် တစ်နိုင်ငံတည်းသား ထိုင်းလူမျိူး ပရာမော့ ဆိုသူက ထိုတောအုပ်ကလေးအတွင်းမှာ ယာယီတဲက
လေးဖြင့် လျှိူ့ ဝှက်ဇိမ်ခန်းဖွင့် လှစ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်…
လွန်ခဲ့ သည့် ဇွန်လ ၅ ရ၇က်နေ့ က အဆိုပါ ပြည့်တန်ဆာခေါင်း ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ခေတ္တအလည်အပတ်ပြန်
သွားခိုက် ၎င်းက ရမ်မရစ်ကို ဇိမ်ခန်း အားအုပ်ချူပ်ရန် လွှဲအပ်ကာထားရစ်ခဲ့ ပါတယ်…
အင်္ဂါနေ့ မှာတော့ ရမ်မရစ်ကို ဒေသဆိုင်ရာတရားရုံးတစ်ခုက ဒါဏ်နေငွေ စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၂၀၀၀ ပေးဆောင်
သူက ဇိမ်ခေါင်း ပရာမော့ကို ကူညီပြီး ဇွန်လ ၇ ရက်နှင့် ၈ ရက်နေ့ များတွင် ထိုစခန်းအားစီမံခန့် ခွဲအုပ်ချူပ်
ပေးခဲ့ တယ်လို့အပြစ်ရှိကြောင်းဝန်ခံထွက်ဆိုခဲ့ ပါတယ်…
တ၇ားရုံးမှတ်တမ်းများအရ ၎င်းနှင့် ပြည့် တန်ဆာနှစ်ဦးအား ဇွန်လ ၈ ရက်နေ့ ည ၁၁ နာရီ ခွဲ တွင် ရဲအရာရှိ
များက ၀င်ရောက်စီးနင်းကာဖမ်းဆီးခဲ့ ရမိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်…
On his visits to Singapore since early this year, Ramrit Apisit, 44, would frequentaforested area off Hougang Avenue 3.
A fellow Thai national, identified only as Pramot, was operatingaprostitution den there in makeshift huts.
When the pimp returned to Thailand on June5foravisit, he left Ramrit in charge.
On Tuesday, Ramrit, 44, was fined S$2,000 (RM4,680) byadistrict court. He had pleaded guilty to assisting Pramot to manageaplace of assignation on June7and 8.
According to court documents, he and two prostitutes were nabbed inaraid by police officers at 11.30pm on June 8.
Posted by Unknown | at 11:39 AM |0comments
ယနေ့ ကမ္ဘာတွင် အထင်ရှားဆုံး၊ အကြီးမားဆုံး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီကြီးများအားလုံးနီးပါး၏ရုံးခွဲများ
တည်ရှိသောဒူဘိုင်းကဲ့ သို့ ကမ္ဘာကျော်မြို့ ကြီးတွင် ရွာငယ်ဇနပုဒ်မှလာသော ကိုပီတာတစ်ယောက် အငြိမ်
မနေနိုင်ပဲအလုပ်အသစ်သို့ ပြောင်းခဲ့ မိရာမှ ယခင်နေထိုင်ခဲ့ ရာအဆောင်မှ အလုပ်အကိုင်အသစ်၏အ
ဆောင်သို့ ပြောင်းရွေ့ လာခဲ့ ရာတွင် ယခင်သုံးစွဲခဲ့ သည့် အင်တာနက်လိုင်းအားစွန့် လွှတ်ခဲ့ ရပြီး လိုင်းအ
သစ်ထပ်လျှောက်ဖို့ လိုအပ်လာခဲ့ ပါတော့ တယ်…
ပြောင်းရွေ့ ရောက်ရှိခဲ့ သောနေရာကား လူနေရပ်ကွက်များနှင့် ဝေးကွာသည့် ဝန်ထမ်းအများစုနေထိုင်ကြ
သည့် သီးသန့် တိုက်တာများတည်ရှိသည့် နေရာဖြစ်ရကား ဈေးဆိုင်၊ ကုန်တိုက်၊အင်တာနက်ဆိုင်များရှိရာ
လိုင်းမရခင်စပ်ကြား အင်တာနက်ကဖေးသို့ သွားရောက်သုံးမည်ဆိုပါက အနီးဆုံးနေရာကား ကုန်တိုက်တစ်
ခုအတွင်းရှိ ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဖြစ်ပြီး ယခုကဲ့ သို့ ပူပြင်းသည့် ရာသီဥတုတွင် ထိုနေရာသို့ လမ်းလျှောက်၍မသွား
နိုင်လောက်အောင် အပူချိန်ပြင်းရကား မရိုးသားသည့် ဒရိုင်ဘာများ ကြီးစိုးသည့် ဒူဘိုင်းတက္ကစီကိုအားကိုး
ရပါတော့ သည် ….
အနီးဆုံးလမ်းမှသွားလျှင် ၁၀ လောက်ကျမည့် ခရီးကို ကိုရွှေကုလားဒရိုင်ဘာများက ပိုမိုရှည်လျားသည့်လမ်း
မှကွေ့ ပါတ်မောင်းကာ ၂၀ လောက်ကျအောင်မောင်းလေသည်…
အနီးဆုံးဆိုသည့် အနှီအင်တာနက်ဆိုင်းကား စက်ပေါင်း လေးငါးဆယ်ရှိကာ လာရောက်သုံးစွဲသူတစ်ဦးဦးမှ ဒေါင်းလုပ် ပြုလုပ်ခဲ့ ပါက အင်တာနက်လိုင်းကား မိတစ်ချက်၊ မမိတစ်ချက်ဖြင့်ရေးသမျှသတင်း ၊ ဖတ်သမျှ
ဆိုဒ် စာမျက်နှာများ မတက်ခြင်း၊ ပြုတ်ကျခြင်းများဖြင့် အစွမ်းပြတတ်လေသည်မို့ ရွှေပြည်သို့ ပြန်ရောက်နေ
သို့ နှင့် မိမိအခန်းတွင် လာရောက်တပ်ဆင်ပေးမည့် အင်တာနက်လိုင်းရပါစေကြောင်း အလုပ်ကုမ္ပဏီအား အဆောတလျင်တိုက်တွန်းပြီး ယခင်လျှောက်ခဲ့ စဉ်ကအတိုင်း ကုမ္ပဏီမှ လိုအပ်သည့် ထောက်ခံစာ၊ ခွင့် ပြု
စာ အား တောင်းဆိုကာ ဒူဘိုင်း၏ နှစ်ခုတည်းသော အင်တာနက်လိုင်းကုမ္ပဏီမှ တစ်ခုဆီသို့ အလျင်အမြန်
သွားရောက်ခဲ့ တော့ သည်….( လက်ရှိနေထိုင်ရာအဆောက်အဦတွင်ထို အင်တာနက်ကုမ္ပဏီမှ အထိုင်စက်
လာရောက်တပ်ဆင်ထား၍ ထိုကုမ္ပဏီမှပေးသောအင်တာနက်လိုင်းသာ လျှောက်၍သုံးရပါသည်၊တစ်ခြား
လိုင်းကို သုံးလို့ မရ၊ လျှောက်လို့ မရပေ….သူတို့ ဆီတွင်အင်တာနက်လိုင်းလျှောက်ရန်အလုပ်သမားဆိုလျှင်
သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီမှ မကန့် ကွက်ကြောင်း၊
ထောက်ခံစာပြရန်လိုအပ်လေသည်…အလွတ်လျှောက်ပြီး လစဉ်ကြေးများမပေးဆောင်ပဲ ပြေးကြသူများရှိခဲ့ 
လို့ ယခုကဲ့ သို့ တင်းကြပ်ထာားပုံရပါတယ်….)
ထိုအင်တာနက်ကုမ္ပဏီရုံးခွဲသို့ ရောက်လျှင် ပါလာသည့် စာရွက်စာတမ်း၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ္တူ၊ အလုပ်ဗီ
ဇာမိတ္တူများ စုံလင်စွာပြသပြီး အင်တာနက်လိုင်းရလိုကြောင်းလျှောက်ထားရာအနှီကုမ္ပဏီကြီးမှ ထိုစာရွက်
စာတမ်းများနှင့် ပင်မလုံလောက်သေး၊ မိမိလက်ရှိနေထိုင်ရာ အဆောက်အဦ၊ အခန်းပိုင်ရှင်နှင့် ချူပ်ဆိုထား
သည့် အိမ်ရှင်၊အိမ်ငှားစာချူပ် မိတ္တူပါမှသာရှေ့ ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည်ဟု ကောင်တာမှ ကုလားဒိန်က ရှင်းလင်းပြတ်သားမိန့် ကြားစွာမိန့် ကြားလေသည်မို့မိမိအလုပ်ကုမ္ပဏီသို့ မျက်နှာငယ်ဖြင့် ပြန်လာကာဇတ်
ကြောင်းကိုပြန်ပြောင်းပြောဆိုသော်၊ ၀န်ထမ်းရေးရော မန်နေဂျာ အန်တီကြီးမှ ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်သူဌေးနှင့် အိမ်
ခြံမြေကုမ္ပဏီတို့ ချူပ်ဆိုထားသော သန်းနှင့် ချီကာ အပေးအယူရှိသည့် ပုဂ္ဂိုလစာချူပ်၊အိမ်ရှုင်အိမ်ငှားစာချူပ်
အား ၀န်ထမ်းအားလုံးအတွက်တစ်ယောက်ချင်းစီသို့ ပေးသလိုအဘယ်နည်းဖြင့် အသင်မောင်ပီတာလက်သို့ 
မိတ္တူကူး၍ပေးနိုင်ငံနည်းဟု မြွေတွေ့ သော သူငယ်မပမာ စူးစူးဝါးဝါးအော်ဟစ်ကာ အားပေးပြောကြားခဲ့ 
လိုက်သည်မို့ အင်တာနက်ချိတ်ကာ ခေတ်မှီမှီ၊ ကမ္ဘာသိကြည့် မြင်မည်ဟုအားခဲကာ ဘလော့ ဂ်တွင် လည်း
အပျင်းပြေရယ်စရာအတည်၊ သတင်းတွေလာချေပြီဟု အတည်တစ်ပေါက်ဖြင့် ဖြီးဖျန်းကာ မှန်းတုတ်၊ ရမ်း
တုတ်မည်ဟူသော စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်သည်လည်း မတ်တပ်ကပင်ပြိုလဲခဲ့ ရချေပြီတည်း…
( သူ့ ဘက်ကကြည့် တော့ လည်းမှန်တာပါပဲလေ ...ထိုအိမ်ငှား၊ တိုက်ငှားစာချူပ်ကို ရာနှင့် ချီသောအရေအ
တွက်မျှရှိသည့် ဝန်ထမ်းအားလုံးကို ပေးရမယ်ဆိုယင်လည်း ဘယ်ဟုတ်တော့ မလည်း...)
လိုင်းမသုံးပဲ broadband wireless ကို USB ဖြင့် သုံးမည်ဆိုလျှင်ဖြစ်နိုင်ပါသော်လည်း လစာကောင်းသူအ
ရာရှိမင်းများ၊ သူဌေးသူကြွယ်များသာတတ်နိုင်မည့် ဈေးနှုံးမို့ ထိုစိတ်ကူးကိုလည်း အသာလျော့ ကာ အင်တာ
နက်လျှောက်နိုင်မည့် အခြေအနေရောက်အောင် မိမိကုမ္ပဏီမှ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးမည့် မိုးနတ်မင်း
ကြီး စိတ်စေတနာကောင်းဖြင့် ကူညီစောင်မမည့် နေ့ ကိုသာမျှော်လင့် စောင့် စားနေရသည်မို့ အချိန်ကာလ
လောလောဆယ်တော့ အဆိုပါအနီးဆုံးအင်တာနက်ဆိုင်တွင် တစ်ပါတ်တစ်ခါ နားရက်ကလေးတွင်တော့ မိ
မိ၏မိသားစုနှင့် အဆက်အသွယ်ရနိုင်ရန်တော့ သည်းခံ၍သုံးနေရပါဦးမည်…
ရုံးမှ ကွန်ပြူတာကို အသုံးပြုကာသတင်းတွေအလျင်အမြန်ခိုးဖတ်ကာ USB ဖြင့် ကူးကာ အခန်းတွင် ဘာသာ
ပြန်သည့် နည်းကလည်း အဆိုပါ USB မှ မည်သို့ ဖြစ်သည်မသိ အချက်အလက်များဖွင့် ၍မရဖြစ်ကာformat
လုပ်ရမည်ဟု စာတမ်းချည်းသာပေါ်လာခဲ့ ၍ format လုပ်လိုက်ရာယခင်ပြန်ထားသောသတင်းများအပါအ
၀င်အချက်အလက်များအားလုံး ကုန်အောင်ပျောက်သွားသည်မို့ ထိုနည်းကိုလည်း စွန့် လွှတ်လိုက်ရပါတော့ 
ယခုမှပင် ဖောင်စီးယင်းရေငတ်နေသလိုဖြစ်နေရသည့် မိမိအဖြစ်ကိုကြည့် ပြီး ရွှေပြည်ကြီးမှဇွဲနပဲကြီးစွာဖြင့် 
ရသမျှအခွင့် လေးသုံးကာ စိတ်ရှည်ဇွဲသန်၊ သီးခံပြီး ဘလော့ ဂ်ရေးနေသည့် ကိုသက်တန့် ၊ မနိုင်းနိုင်းအပါ
အ၀င်ဘလော့ ဂ်ဂါအပေါင်းအား ပိုမိုလေးစားကာ စာနမိပါတော့ တယ်...
Posted by Unknown | at 6:23 AM |3comments
German soldier finds 1m euros that fell off the back ofalorry
ယူရိုဒေါ်လာငွေ ၁ သန်း ( ဒေါ်လာ ၁.၄၃ သန်း ) ကောက်တွေ့ ပြန်အပ်သည့် ဂျာမန်စစ်သား…
ဂျာမနီနိုင်ငံမှ စစ်သားတစ်ယောက်ဟာ ယူရိုငွေ ၁သန်း (ဒေါ်လာ ၁.၄၃ သန်း) ကျော်ပါဝင်သည့် ငွေတိုက်
သေတ္တာများအား တွေ့ ရှိပြီး နောက်နှစ်ရက်အကြာတွင် ပြန်လည်အပ်နှံခဲ့ ပါတယ်…
အဆိုပါစစ်သားဟာ ဂျာမနီနိုင်ငံတောင်ပိုင်း၊ ဘာဗေးရီးယာဒေသ ဘက်ကစ်ဆင်ဂျင် မြို့ အထွက် ကားလမ်း
မကြီးတစ်ခုဘေးတွင် အဆိုပါငွေသေတ္တာများအား တနင်္လာနေ့ ကတွေ့ ရှိခဲ့ ခြင်းဖြစ်ပါတယ်…
အာဏာပိုင်များကအဆိုပါငွေသေတ္တာများအားတင်ဆောင်လာသည့် လော်ရီကားပေါ်မှ ကျသွားခဲ့ ပြီးနောက်
အပူတစ်ပြင်း လိုက်လံရှာဖွေနေခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်…
အဆိုပါစစ်သားက ငွေသေတ္တာများကို ရဲတပ်ဖွဲ့ ထံသို့ ပေးအပ်ခဲ့ လိုက်တာဖြစ်ပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ အနေနှင့်ထိုစစ်
သားအား ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေများဖြင့် တရားစွဲဆိုသင့် မသင့် ကို စဉ်းစားဆုံးဖြတ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်…
ဒေသဆိုင်ရာအထက်တန်းဥပဒေအရာရှိ ရိန်နာဗောက် ကပြောကြားရာမှာ အဆိုပါစစ်သားအနေဖြင့် ငွေ
သေတ္တာများအားတွေ့ ရှိပြီးနောက် ရဲတပ်ဖွဲ့ ထံချက်ချင်းမအပ်ပဲ နှစ်ရက်ကြာသိမ်းထားခဲ့ ရခြင်း၏ရည်ရွယ်
ငွေသေတ္တာများတင်ဆောင်ထားသည့် လော်ရီကားကြီး၏တံခါးသူ့ အလိုလိုပွင့် ထွက်လာပုံရပြီးသေတ္တာများ
ကားပေါ်မှပြုတ်ကျလာသည်ကိုတွေ့ မြင်ခဲ့ ရသည်ဟု မျက်မြင်သက်သေများက ဆိုကြပါတယ်…
တစ်ခြားသောမျက်မြင်သက်သေတစ်ဦးကလည်း စစ်ကားတစ်စီး ရပ်တန့် ပြီးတစ်စုံတစ်ရာကိုကားထဲသို့ တင်
ဆောင်ခဲ့ သည်ကိုမြင်တွေ့ ခဲ့ ရတယ်လို့ သတင်းပေးခဲ့ ပါတယ်….
ရဲတပ်ဖွဲ့ ကတော့ ယခုထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်ဟာ စစ်တပ်အပေါ်၎င်းတို့ ရဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးနေမှု ကိုညွှန်းဆိုခဲ့ 
ကောက်ရတဲ့ ငွေယူရိုဒေါ်လာ ၁ သန်း (ဒေါ်လာ ၁.၄၃ သန်း) ပြန်ပေးတယ်…ဆိုတော့ ဂျမန်စစ်တပ်မို့ သာ
A German soldier has turned in safe-deposit boxes containing more than 1m euros ($1.43m; £890,000), two days after finding them. The soldier found the boxes besideamotorway exit near the Bavarian town of Bad Kissingen on Monday.
The authorities had been searching urgently for the cases after they fell offalorry transporting cash. The soldier handed them in to police, who have yet to decide if he should face criminal charges.
Regional senior prosecutor Rainer Vogt said it was not clear what the man's intention was in keeping the safe-deposit boxes for two days before going to the police. Witnesses said they saw the boxes fall out of the lorry afteradoor apparently swung open by itself.
Another witness reported seeingamilitary vehicle stop and load something inside. Police said this statement had already directed their investigation towards the military.
Posted by Unknown | at 2:42 AM |0comments
အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ ဓါတ်ပုံတစ်ပုံဟာ စကားလုံးပေါင်းမြောက်များစွာကို ကိုယ်စားပြုတယ်လို့ ဆိုလေတာမို့ 
ဘလော့ဂ်ကြွလာပ၇ိတ်သတ်များ အပျင်းပြေစေ၊ အတွေးရစေဖို့အင်တာနက်က တွေ့ မိသမျှ ၊ တစ်ချိူ့ 
မှာ တင်ထားနိုင်တာကိုက နည်းတဲ့ စိတ်ထားမြင့် မြတ်မှုမဟုတ်ပါဘူး....မူရင်းရိုက်ကူးသူမသိပဲ ကြားကတစ်
ယောက်က ကူးတင်တယ်ဆိုယင်တော့ လည်းမတတ်နိုင်ပေဘူးပေါ့ ...သို့ သော်စီးပွားရေးအရမဟုတ်ပဲ ၀ါ
သနာအရ၊ အပျော်ဗဟုသုတအနေနဲ့ သီးသန့် ခွင့် မတောင်းပဲတင်တာမို့ သိခဲ့ လျှင်တောင်မှ ခွင့် လွှတ်နိုင်
အချစ်ရဲ့ နွေးထွေးမှုကိုရှာဖွေ၍တွေ့ ရှိခဲ့လေပြီလား...
ရတာမလို...လိုတာမရမို့တစ်ကိုယ်တည်း အပျိူကြီးမမများပါတဲ့....
ဒီစာရင်းက အပြည့် အစုံတော့ ဟုတ်မယ်မထင်ဘူး....
အသည်းကွဲ....အချစ်နာအတွက် အကောင်းဆုံးကုထုံးတဲ့ ဗျာ...
တွေးမနေနဲ့ ...ဆွေးမနေနဲ့ အမြန်ဆုံးသာ ကုသကြပါဗျာ...
တစ်ခါတစ်လေတော့ လည်း အဲဒီလိုနေရာမျိူးသွားချင်ပါတယ်...
တစ်ဦးချင်းပုဂ္ဂိလအမြင်နဲ့ ဆိုယင် ကျွန်တော့် အယူအဆကလည်း ရှေးဟောင်းပစ္စည်းဆိုတာ
( သမိုင်းဝင်အထောက်အထားကလွဲယင် ) ဘာမှသိပ်ပြီးထူးဆန်းတယ်လို့ မထင်ပါဘူးဗျာ...
( မုဒိန်းမှုနဲ့ အဖမ်းခံ၊ တရားစွဲခံနေရတဲ့ IMF အကြီးအကဲလေ...)
အင်း...အတွယ်အတာ၊ အကွယ်အကာ အနှောင်အဖွဲ့ တွေနဲ့ သူလေးကိုရွေးရမလား...
အမြင်အာရုံမှာ ထင်လာရုံဝင်မစဲစေတဲ့ ...ကြင်နာပုံတကယ်ထူးမယ့် စေတနာရှင်
ယုတ္တိဗေဒနဲ့ ကြောင်းကျိူးဆက်စဉ်းစားလိုက်တော့ ....
Posted by Unknown | at 10:02 PM |2comments
British banking consultant retrains as witch doctor
ဗြိတိသျှလူမျိူး ဘဏ်လုပ်ငန်းများဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံပညာရှင်တစ်ဦးဟာ အာဖရိကတိုင်းရင်းနတ်ဆရာအ
ဖြစ်ခံယူနိုင်ရန် အာဖရိကနိုင်ငံ တောတောင်ခြုံပုတ်များထူထပ်သည့် ဒေသတွင် သုံးလကြာ ဆင်းရဲပင်ပန်းစွာ
ဖြင့် သုံးလကြာ လေ့ ကျင့် သင်ယူခဲ့ ပါတယ်…
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၊ ဘာ့ ခ်ရှိင်းယားနယ်၊ မိုင်ဒင်ဟက်ဒ် အရပ်မှမိသားစုစဉ်ဆက်မွေးဖွားနေထိုင်ခဲ့ သည့် အသက်
၃၂ နှစ်ရှိ သောမတ်စ်ဟိဖီးလ်ဒ် ဟာ သုံးရက်တိုင်တိုင်မအိပ်မစက်နေခဲ့ ခြင်း၊ နံနက် ၂ နာရီခွဲတွင်ထကာ အာဖရိကလူမျိူးတို့ ၏ရိုးရာအကများကရခြင်း၊ ဆိတ်သွေးများအံရခြင်း စသည်ဖြင့် ဆန်ဂိုမာ ဟုခေါ်သည့် 
နတ်ဆရာ၊ စုန်းဆရာ၊ ကဝေဆရာ၊ ဆေးဆရာ အဖြစ်ရောက်ရှိယင် လေ့ ကျင့် ခဲ့ ရပါတယ်…
သူဟာ ခြုံပုတ်များထဲတွင်အိပ်စက်ရပြီး ရိုးရာဝတ်ရုံများဝတ်ဆင်ခဲ့ ရသလို ဒေသခံများက ဝေးလံသီခေါင်
သည့် မိုဇမ်ဘစ်နယ်နှင့် ကပ်လျှက်ရှိသည့် မပူမာလန်ဂါပြည်နယ်၊ မန်ဂ၀မ်နီ ရွာကလေး တွင် လျှိူ့ ဝှက်မြုပ်နှံ
ထားသည့် တိရိစ္ဆာန်များ၏ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများအားလည်း တောနင်းရှာဖွေပြခဲ့ ရပါတယ်…
သူဟာ သင်ကြားပြသပေးသူဆရာများပြောကြားသည်ကိုနားလည်နိုင်ရန် ဒေသခံဘာသာ ဆီဆ၀ါတီ စကား
ဆရာများကသူ့ ကို ဂိုဂိုမန်ဒါဝီ လို့နာမည်အသစ်ပေးခဲ့ ကြပါတယ်…
သူ့ လွန်ခဲ့ သည့် တနင်္ဂနွေနေ့ အထိကိုမိသားစု၊ မိတ်ဆွေများအားလုံးနှင့် အဆက်အသွယ်ဖြတ်ထားစေခဲ့
သည်မှာမိဘနှစ်ပါးဖြစ်သူ အယ်လီနှင့် ဘရိုင်ယန်ဟိဖီးလ်ဒ် တို့ သားဖြစ်သူရဲ့ နတ်ဆရာဖြစ်အောင်ပွဲအခမ်း
အနားကိုတက်ရောက်ရန် တောင်အာဖရိက နိုင်ငံကိုလေယာဉ်ဖြင့် တနင်္ဂနွေနေ့ ကရောက်ရှိခဲ့ သည့် အချိန်
သူဟာ ဆန်ဂိုမာ ပညာ ( အာဖရိကနတ်ဆရာ၊ ပညာ) အကြောင်းကိုဒေသခံမိတ်ဆွေတစ်ဦးထံမှ လေ့ လာ
သိရှိခဲ့ ရတာဖြစ်ပြီး ၎င်း၏အလုပ်ဖြစ်သည့် ဘဏ်များအား ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ စွန့် စားခြင်းများ၊ ဘဏ်စနစ်
သတင်းအချက်အလက်များလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အကြံပေးခြင်းတို့ ကို လွန်ခဲ့ သည့် ဖေဖော်ဝါရီလက စွန့် လွှတ်
ခဲ့ ပြီး နတ်ဆရာအဖြစ် နှစ်ပေါင်းများစွာလေ့ လာကာ နောက်ဆုံးလက်တွေ့ လေ့ ကျင့် သင်ယူခဲ့ တာဖြစ်ပါ
“ ဒါဟာ ကျွန်တော်က လုပ်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ တာမဟုတ်ပါဘူး….တစ်ခြားနည်းလမ်းတွေများစွာထဲ
ကမှ လုပ်ဖြစ်အောင် ကျွန်တော့် ကို ရွေးချယ်စေခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်… လေ့ ကျင့် သင်ယူရတာတွေဟာ များ
ပြားလှပြီး အဆင့် ဆင့် မို့ ခပ်ပေါ့ ပေါ့ နဲ့ လုပ်ခဲ့ တာမဟုတ်ပါဘူး…” လို့ သူကဆိုခဲ့ ပါတယ်…
သူ့ ရဲ့ လောလောလတ်လတ်တတ်ကျွမ်းနားလည်ခဲ့ သည့် ပညာရပ်နှင့် ပါတ်သက်ပြီး မည်ကဲ့ သို့ ဆက်လက်
အသုံးပြုမယ်ဆိုတာမဆုံးဖြတ်ရသေးပေမယ့်သူကတော့ ကိပ်တောင်းမြို့ တွင် အခြေချရန် အိမ်တစ်လုံးဝယ်
A British banking consultant has retrained asawitch doctor afteragruelling three months' initiation in the South African bush. Thomas Heathfield, 32, whose family hail from Maidenhead in Berkshire, renounced sleep for three days, rose at 2.30am to dance for the tribal ancestors and vomited up goats' bloods as part of his training to becomea"sangoma".
He slept out in the bush, wore traditional robes and was sent to hunt for the animal body parts hidden by locals in the remote village of Mangweni, close to the Mozambican border in Mpumalanga province. He had to learn enough of the local siSwati language to understand his instructors, who also gave himanew name, Gogo Mndawe
He was banned from all contact with family and friends until last Sunday, when his parents Ally and Brian Heathfield flew out to South Africa to attend his graduation ceremony. He said he first learned about sangomas fromalocal friend and spent many years studying the practice before giving up his job advising banks on risk and information security in February to train as one himself.
"It's not something you just decide to do – it chooses you rather than the other way round and it's suchamassive process that you don't enter into it lightly," he said. While still undecided about how he will use his new-found skills, he intends to settle in Cape Town and buyahouse.
Posted by Unknown | at 2:37 AM |0comments
Businessman hands out millions to the poor
ကနေဒါနိုင်ငံသားတရုတ်လူမျိူး ဆာရီးချန်း တစ်ယောက်သူ့ ရဲ့ ဘိုးဘွားမိဘများ၏မွေးရပ်မြေသို့ မကြာသေး
ဒီတစ်ကြိမ်တော့ ကနေဒါနိုင်ငံ၊ ကနေဒါဖေးချွေအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစက်မှုအုပ်စုကုမ္ပဏီကြီးရဲ့ ဥက္ကဌ ဖြစ်သူ
ဟာ ငွေစက္ကူယွမ်ငွေ ၃.၂ သန်း ပါတဲ့ အိတ်ကြီးကို၎င်းနှင့် အတူတစ်ပါတည်းယူဆောင်လာခဲ့ တာဖြစ်ပါ
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်သူဌေးကြီးဟာ ထိုငွေများကို တရုတ်နိုင်ငံ၊ တောင်ပိုင်း ဟိုင်နန်ပြည်နယ်မှ ဆင်းရဲနွမ်း
လှူဒါန်းငွေအများစုကို သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ မသန်မစွမ်းသူများ နှင့် ဆင်းရဲချိူ့ တဲ့ သည့် တက္ကသိုလ်ကျောင်း
သူ၊ကျောင်းသားများကို လှူဒါန်းခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်…
နောက်ထပ်ယွမ်ငွေ ၂ သိန်းကိုတော့ ဟိုင်းကိုမြို့ ၊ ရုန်ရှန်းကျေးရွာရှိဟိုင်နန် တိရိစ္ဆာန်ငယ်များ စောင့် ရှောက်
ကာကွယ်ရေးအသင်းကို လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ ပါတယ်…
ယခုကဲ့ သို့ ၎င်း၏လူသိထင်ရှားလှူဒါန်းခြင်းလုပ်ရပ်ဟာ တစ်ခြားသောချမ်းသာကြွယ်ဝသည့် သူဌေးများ
ဤကဲ့ သို့ လှူဒါန်းမှု အစီအစဉ်များမှာ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါဝင်လာနိုင်စေရန်တိုက်တွန်းအားပေးသည့် 
အနေဖြင့်ရည်ရွယ်ခဲ့ ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ချန် ကဆိုပါတယ်…
ကန်တုံနွယ်ဖွား လူမှုအကျိူးဆောင် သူဌေးဟာ ယခုအချိန်အထိ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများအား ယွမ်ငွေ ၁.၁၄ ဘီလီယံ လှူဒါန်းခဲ့ ပြီးဖြစ်ပါတယ်….
Canadian Chinese Saree Chan stepped foot on his ancestors' homeland again recently.
This time, the chairman of Canada Fei Cui International Industrial Group Ltd brought alongabag containing 3.2mil yuan (RM1.5mil) in currency notes.
The businessman donated the money to the underprivileged in South China's Hainan province.
Most of the cash went to the elderly, the disabled and poor university students.
Another 200,000 yuan (RM92,943) was handed over to the Hainan Small Animal Protection Association in Rongshan village of Haikou city.
Chan said his high-profile charity event was aimed at encouraging more rich people to participate in such programmes.
The philanthropist of Cantonese descent has so far donated 1.14bil yuan (RM529.8mil) to help the poor in
Source: China Daily / Hainan Net
Posted by Unknown | at 2:34 AM |0comments
လိမ်တယ်၊ ညာတယ် လူညာကြီးတွေကို ဘယ်လိုများအကဲခတ်နိုင်မလည်းဆိုတာ နည်းပေးလမ်းပြကလေးပါ
Posted by Unknown | at 5:41 AM |0comments
Labels: soure: buzzfeed
Posted by Unknown | at 10:48 PM |0comments
အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ ဓါတ်ပုံတစ်ပုံဟာ စကားလုံးပေါင်းမြောက်များစွာကို ကိုယ်စားပြုတယ်လို့ ဆိုလေတာမို့ အင်
တာနက်လိုင်း အဆင်မပြေခင်ကာလအတွင်း ဘလော့ဂ်ကြွလာပ၇ိတ်သတ်များ အပျင်းပြေစေ၊ အတွေးရစေ
ဖို့ယခင်အင်တာနက်က တွေ့ မိသမျှ ၊ တစ်ချိူ့ လည်း ဖော်ဝါ့ ဒ်မေးကရတဲ့ ပုံလေးတွေကို schedule နဲ့ တင်
သနာအရ၊ အပျော်ဗဟုသုတအနေနဲ့ တင်တာမို့ သိခဲ့ လျှင်တောင်မှ ခွင့် လွှတ်နိုင်မယ်ထင်ပါတယ်...
ဖြည့် စွက်၊ဖြန့် ထွက်တွေးတောနိုင်ကြပါစေသတည်း...
သူ့ ဖြတ်ထိုးဥာဏ် ကောင်းလှပြန်....
သူတို့ ဆီမှာတော့ နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲစီးလေသလား...
ကိုယ့် ဆီမှာတော့ ဒါမျိူးဆို ဗီအိုင်ပီ နိဗ္ဗာန်ယာဉ်ပဲ...
ကိုယ်ကသူ့ ကို ဓါတ်ပုံရိုက်မလားလို့ ...သူကကိုယ့် ကိုပြန်ရိုက်နေတယ်ဗျာ...
ကဲ...အဲဒါကိုမှ ကြိုက်တတ်သူများအတွက် သီးသန့် ပါတဲ့ ....
လုပ်သင့် ယင်တော့ လုပ်သာလုပ်ပစ်လိုက်ပါတဲ့ ဗျာ...
ကညာပျိူနဲ့ ဇရာအို Remix....
ဂေါက်သီးလိုက်ကောက်စရာမလိုတဲ့ ဂေါက်ရိုက်ကျင့် နည်း....
စာကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်လျင်လျင်မြန်မြန်ရိုက်နိုင်ဖို့ အတွက် နာမ်နှိမ်ပြီးယတြာချေနိုင်မယ့် 
ကီးဘုတ်ဖိနပ်...များများစီးပေးယင် မြန်မြန်ရိုက်တတ်လာလိမ့် မယ်...
ငှက်ပျောပင်စိုက် မိလိုက်ဖပါ ဆိုတဲ့ စကားပုံလိုပါပဲ....
အဖေ၊အမေထက်ပိုထက်တဲ့အတိဇာတ သားနဲ့ သမီးပေါ့ ...
အိမ်မရှိသူများ ဂျပန်ဆူနာမီကြောင့် အိမ်အလုံးလိုက် ပျက်စီးပြီးမျောနေတဲ့ အိမ်တစ်လုံး
နောက်များမော်တော်ဆိုင်ကယ်နဲ့ သွားယင် ဒီလိုကုလားထိုင်မျိူးတင်ပြီးစီးနိုင်ပါတယ်...
ဒါမှနောက်ကနေထိုင်ပြီးအမိန့် ပေးတာပိုပြီးပီပြင်ပါလိမ့် မယ်...
Posted by Unknown | at 5:16 AM |0comments
Lovesick parrot couldn't stop throwing up on owner